တရုတ်လူမျိုးများက ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဒါဖာဒေသဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ-အာဖရိကသမဂ္ဂ စစ်ရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ (UNAMID) ၏ ပူးတွဲ အထူးကိုယ်စားလှယ် Anita Kiki Gebe က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်တွင် ဆူဒန်နိုင်ငံ El-Fashir မြို့၌ ဒုတိယမြောက် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အလယ်အလတ်တန်းစား ဘက်စုံရဟတ်ယာဉ်တပ်ဖွဲ့ (CMUHU02) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်ပြား ပေးအပ်ချီးမြှင့်စဉ်(ဆင်ဟွာ) '
ပေကျင်း ၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညီမျှမှု နှင့် တရားမျှတမှုကို အစဉ်အမြဲ စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ‌အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီက ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရားဝင်နေရာ ပြန်လည်ရရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 25 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Monday said the Chinese people have always safeguarded international fairness and justice, and made major contributions to world peace and development.
Xi made the remarks in Beijing atacommemorative meeting marking the 50th anniversary of the restoration of the People’s Republic of China’s lawful seat in the United Nations. ■
Photo – Anita Kiki Gebe, deputy joint special representative of the United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID), awards UN peace medal toasoldier of the 2nd China Medium Utility Helicopter Unit (CMUHU02) in El-Fashir, Sudan, July 17, 2019. (Xinhua)